Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. सुस्ताउँदो ब्यान्ड म्युजिक – Emountain TV
सुस्ताउँदो ब्यान्ड म्युजिक
काठमाडौँ, २ जेठ । तपाईंलाई मन पर्ने नयाँ नेपाली ब्यान्ड कुन हो , प्रश्न सुनेपछि गायक मुक्ति शाक्य एक छिन टोलाए । निराशजस्तै देखिए । अनि भने, ‘विगत पाँच/ सात वर्षयता नयाँ ब्यान्ड आएको छैन । रक सिनमा राम्रो गरिरहेको अन्डरसाइड छ । तर, यो नयाँ ब्यान्ड होइन ।’
काठमाडौं– नेपालको मेटल म्युजिकमा अग्रणी ‘अन्डरसाइड’ ब्यान्ड सन् २०१० मा स्थापना भएको थियो । मुक्तिका अनुसार नेपालमा सांगीतिक समूहहरू बन्नै छाडेका छन् । यस्तो किन भएको होला , मुक्ति एन्ड द रिभाइभलका फ्रन्टम्यानलाई यसको ठयाक्कै जवाफचाहिँ थाहा छैन । ‘नयाँ ब्यान्ड आउँदा राम्रो हुन्छ,’ उनले यत्ति भने, ‘हामीलाई पनि च्यालेन्ज फिल हुन्छ । नयाँले त यस्तो गर्‍यो, हामीले झन् मिहिनेत गर्नुपर्छ भन्ने दबाब हुन्छ । तर, अहिले यस्तो छैन । बजारमा नयाँ ब्यान्ड देखेको छैन मैले ।’
द मन्की टेम्पलका भोकलिस्ट सरिन देउजालाई ब्यान्ड बन्दै नबनेको भन्ने लाग्दैन । तर, ती जनस्तरमा पुग्न नसकेको उनले बताए । ‘थुप्रो नयाँ ब्यान्ड छन्,’ हाल अमेरिका रहेका उनले फेसबुकमार्फत भने, ‘तिनीहरू श्रोतासम्म चाहिँ पुगेका छैनन् । यसका लागि मिहिनेत, लगाब र धैर्य चाहिन्छ ।’ नयाँ ब्यान्डहरू सिनेमा आउँदा नयाँ शैली र स्वाद अनुभव गर्न पाइने उनको बुझाइ छ । श्रोताका लागि यो राम्रो हुने बताए ।
‘बिर्सिदेऊ मलाई ’, ‘पहिलो र अन्तिम पत्र ’ जस्ता गीत निकालेको ‘मजिपा’ नामक नयाँ ब्यान्ड १९७४ एडीका गिटारिस्ट मनोजकुमार केसीलाई राम्रो लागिरहेको छ । पछिल्लो समय स्थापना भएका ‘पहेँलो बत्तीमुनि’ र ‘द एक्ट’ पनि उनका फेभरेट हुन् । यी ब्यान्डले म्युजिकमा राम्रो गर्न सक्ने छाँट मनोजले देखेका छन् । ‘ब्यान्डहरू टन्नै फर्म भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘तर, ठूलो पाराले आउन नसकेको साँचो हो ।’
म्युजिकलाई व्यवसाय बनाउन सकिँदैन ठानेर युवाहरूले आफ्ना ब्यान्डलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको हुन सक्ने मनोजको अनुमान छ । ‘प्लस टु सकेपछि विदेश जाने चलन छ अहिले,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि कन्सर्ट आयोजकले नयाँभन्दा स्थापित ब्यान्डलाई महत्त्व दिन्छन् । यस्तोमा नयाँलाई एडजस्ट हुन अलि गाह्रो पर्छ ।’ यति हुँदा हुँदै पनि संगीत क्षेत्रमा गरिखानका लागि प्रशस्त बाटो खुलेको उनले बताए । रेस्टुरेन्टहरूमा बजाउनेदेखि इन्स्टिच्युट र स्कुलहरूमा संगीत सिकाएर पनि राम्रो आम्दानी गर्न सकिने बताए ।
२०१० मै स्थापित ‘जिन्दावाद’ ब्यान्डका रोहित शाक्य युटयुब र अन्य डिजिटल प्लेटफर्मका कारण मान्छेहरू सोलो करिअरमा रमाउन थालेको ठान्छन् । यही कारण ब्यान्ड म्युजिक सुस्ताएको उनको बुझाइ छ । बीचमा निष्क्रिय आफ्नो ब्यान्डलाई रोहित पुन जगाउन खोज्दै छन् ।
वर्ष दिनअघि गठन भएको अल्टरनेटिभ इलेक्ट्रो रक विधाको ‘द एक्ट’ ब्यान्डकी भोकलिस्ट सुजिना श्रेष्ठ ब्यान्डहरू कम हुँदा संगीत क्षेत्रमा मौलिकता हराउने बताउँछिन् । ‘ब्यान्डले र साउन्ड निकाल्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसमा प्रोडयुस्ड म्युजिक हुँदैन । चारपाँच जनाको सिर्जनशीलता मिसिएको संगीत र स्टुडियोमा प्रशोधन गरिएको संगीतमा धेरै फरक हुन्छ ।’ कभर सङको माहोलले ब्यान्डको महत्त्व छायामा पारेको हुन सक्ने उनको अनुमान छ ।
सुजिना पहिला ‘डियाब्लो’ र ‘क्रमश नेपाल’ ब्यान्डमा थिइन् । सोलो म्युजिक खासै गरिनन् । अचेल विभिन्न कार्यक्रम र कम्पोजिसनका काममा व्यस्त हुन्छिन् । द एक्टले सार्वजनिक गरेको ‘हराएको थिएँ म ’, ‘बुझाऊँ म कसरी’, ‘प्रश्न ’ जस्ता गीत रक प्रेमीमाझ चर्चित छन् । ब्यान्डहरू यसरी आ–आफ्नो सर्कलमा मात्रै सुनिन थालेको मनोजले बताए ।
‘पहिला रेडियो र टेलिभिजन मात्र हुँदा ब्यान्डका गीत सबैले सुन्थे,’ उनले भने, ‘ती गीत सबैलाई कण्ठ हुन्थ्यो । अहिले युटयुबमा खोजेर सुन्नुपर्छ । यसले श्रोतालाई विभाजित गरिदिएको छ ।’ कान्तिपुरबाट
सुरेन्द्र केसीको चुनौति : प्रधानमन्त्रीजी बुद्धिजीविसँग आउनु खुल्ला मञ्चमा बहस गरौं (भिडियो सहित)
इशाईकरणमा केपी–माधवलाई फसाएर प्रचण्ड उम्किए, अव सरकार ढल्छ : भरत दाहाल (भिडियो सहित)
यस्तो देखिए ‘क्याप्टेन’को दुई पोस्टरमा अनमोल
‘जय श्री दाम’को ट्रेलर सार्वजनिक (भिडियो)
मिस वर्ल्ड: शृङ्खला खतिवडा उत्कृष्ट १२ मा सिमित
शृङ्खला खतिवडाको मिस वर्ल्ड यात्रा शीर्ष १२ मा सकियो
‘कबड्डी’ निर्देशकको फिल्म गर्दै प्रदीप
फरक छिन् शृङ्खला
के नक्कली सम्बन्ध हो प्रियंका-निकको? यो म्यागजिनले उठायो गंभीर प्रश्न